သာလွန်ဇောင်းထက်| January 22, 2013 | Hits:4,787
ထက်ထက် January 22, 2013 - 10:06 pm သာလွန်ဇောင်းထက်…ကျွန်မသူငယ်ချင်းသာလွန်ဇောင်းထက်ပါလား..သိပါရစေ။
Reply swe htwe January 22, 2013 - 11:25 pm We think U Shwe man is right. This priciple should not be used in this time.
Reply Mg Myan Mar January 23, 2013 - 1:29 am နလပိန်းတုံး တိုင်းပြည် က ဗလုံးဗထ္ဂေးအမတ်တ္ဂေ တစ်ဗျောင်းဗျောင်းနဲ့ ဗိန်းမောင်းတိုက်ပြီး၊